Abantu ababalekayo kwizakhiwo emva kwenyikima enkulu ye-8.2 yabetha iMexico-kwingingqi yaseGuatemala
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziPhukileyo zaseGuatemala » Abantu ababalekayo kwizakhiwo emva kwenyikima enkulu ye-8.2 yabetha iMexico-kwingingqi yaseGuatemala
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziPhukileyo zaseGuatemala • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • Safety • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Le nyikima ingu-8.2, yavakala de yafika naseMexico City. Inyikima yayinzulu kunxweme lwaseChiapas, eMexico. Abakhenkethi baphonononga ezi ntaba zineentaba kunye namahlathi ashinyeneyo aneendawo zezinto zakudala zaseMeyi kunye needolophu zaseSpain zedolophu yaseCanó Cristóbal de las Casas, kufutshane nomda waseGuatemala.
Inkqubo yokulumkisa ngeTsunami yaseMelika ilumkisa ngeTsunami enokwenzeka. Iingcali zilumkisa nge-3m Tsunami kunxweme lwaseMexico olunokuthi lubethe malunga neeyure ezi-3 ngo-1.40 ekuseni kwi-PST.
Emva kothuko luvakala kuluhlu lwe-6.2
Abantu babonwa bebaleka kwizakhiwo. Umbane ucinyiwe kwiindawo zeSixeko saseMexico.
Le nyikima inokubangela umonakalo omkhulu, ukulimala kunye nokulimala.